Nzira yekunamata kuna Mwari zvinoenderana neBhaibheri ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Nzira yekunamata kuna Mwari zvinoenderana neBhaibheri. Tinofanira namata nekutenda, uchinamata Mwari, tichishandisa mazwi edu pachedu, kureurura zvivi zvedu, nemoyo unotenda uye nekupa zvese mumaoko aMwari.
1 Nzira yekunamata kuna Mwari zvinoenderana nebhaibheri nhanho nhanho
2 Nzira nomwe dzekunamata zvinoenderana nebhaibheri
2.1 1. Tenda kuti Mwari achateerera
2.2 2. Tanga nekutaura zvinhu zvakanaka nezvaMwari
2.3 3. Kumbira Mwari nemashoko ako
2.4 4. Reurura uye kumbira ruregerero rwezvivi zvako
2.5 5. Zviise mumaoko aMwari
2.6 6. Tenda zvinhu zvakanaka
2.7 7. Iti "muzita raJesu"
3 Usangonamata kana uchinge wangoida
4 Nguva yekunamata
Nzira yekunamata kuna Mwari zvinoenderana nebhaibheri nhanho nhanho
Hapana imwe nzira yekunamata nenzira kwayo, asi Bhaibheri rinoratidza 7 misimboti iyo inodzidzisa manamatiro kuna Mwari:
Tenda kuti Mwari vanonzwa munyengetero wako.
Taura zvakanaka nezvaMwari.
Shandisa mazwi ako pachako.
Reurura zvivi zvako uye ukumbire ruregerero.
Udza Mwari kuti unovimba naye chero mhinduro.
Kupa kutenda nekuda kwezvinhu zvakanaka muhupenyu hwako.
Namata uchiti "muzita raJesu."
Nzira nomwe dzekunamata zvinoenderana nebhaibheri
1. Tenda kuti Mwari achateerera
Tenda kuti Mwari vachateerera
Usati watanga, yeuka izvozvo Mwari anotida uye anonzwa minyengetero yedu yese. Ane simba rose uye anoda kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. Patinonamata, tinofanira kuzvitenda. Ani naani anotenda achaona mhinduro yaMwari.
Achipindura Jesu, akati kwavari: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kana mune rutendo uye musingakahadziki, hamungaiti izvi zvemuonde chete, asi kana mukati kugomo iri: Ibva, uzviwisire mukati gungwa, zvichaitwa.
Uye chero chaunokumbira mumunamato, uchitenda, uchagashira.
2. Tanga nekutaura zvinhu zvakanaka nezvaMwari
Tanga kutaura zvakanaka pamusoro paMwari
Nenzira yakapusa, udza Mwari kuti uzive kuti ndiMwari wemasimbaose, kuti ndiye mambo uye kuti zvese zvinoenderana naye. Ndiko kunamata Mwari. Semuyenzaniso:
Ishe, ndimi mambo.
Mwari wangu, ndinokudai nekuti munotonga pasi rose.
Mwari mukuru uye ane simba.
3. Kumbira Mwari nemashoko ako
Kumbira Mwari nemashoko ako
Usashandise zvimiro zvendangariro kana mitsara. Ita zvikumbiro zvako kuna Mwari nekutenda uye nyore. Anotiziva uye anotida sezvatiri, haafarire kana tikataura zvakaoma. Muudze kuti unonzwa sei. Taura naye. Zvimwe zvinhu zvaunogona kutaura kuna Mwari nemazwi ako:
Ndibatsireiwo kuwana basa changamire.
Baba vanoporesa hanzvadzi yangu yairwara.
Mwari wangu, sei ndakasuruvara? Ndinokuda.
Ishe, ini ndoda kukunda muyedzo, ndibatsireiwo.
Baba, chii chichava kwandiri zvino? Ndibatsire.
4. Reurura uye kumbira ruregerero rwezvivi zvako
Reurura uye kumbira ruregerero rwezvivi zvako
Iva pachena naMwari. Iye anotoziva zvese, asi anoda kunzwa moyo wako unopfidza. Udza Mwari zvawakaita uye kumbira ruregerero. Semuyenzaniso:
Ndakanyepa. Pamusoroi changamire !.
Ishe, ndinoda ruregerero. Ndakaikopa pamuedzo.
Baba, ndafunga zvakaipa, ndiregererei.
Mwari wangu, ndakundikana zvakare, regererai zvivi zvangu.
5. Zviise mumaoko aMwari
Zviise mumaoko aMwari
Jesu akatidzidzisa kuti titi "Kuda kwenyu ngakuitwe." Izvi zvinoreva kuti mumunamato wako Zvakakosha kuti iwe uzive kuti Mwari vari mukutonga. Iti, semuenzaniso:
Ishe, ndinoda kuti zvinhu izvi zviitike, asi ndinoziva kuti ndimi Mwari uye munoziva zvakandinakira.
Ndinoda Ishe uyu, asi ita zvaunofunga kuti ndizvo zvakanaka. Ndinovimba nemi.
Ndiri kuda mhinduro, Ishe. Asi kunyangwe zvikasaitika, ndinoziva kuti unondida uye chimwe chinhu chiri nani chichauya.
Baba, kana izvo zvandinokumbira kwamuri zvisiri zvakandinakira, ngazvive sezvamunoda
6. Tenda zvinhu zvakanaka
Tenda nekuda kwezvinhu zvakanaka
Kunamata hakusi kungobvunza Mwari. Nguva dzose zvakanaka kupa kutenda mumunamato nekuda kwezvawakaitirwa naMwari. Funga nezvezvakanaka zvinhu uye nekutenda Mwari nekuda kwavo.
Vongai pazvinhu zvose, nekuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu.
7. Iti "muzita raJesu"
Taura muzita raJesu
Haisi mashiripiti fomula, asi Kupedzisa munamato wako "muzita raJesu" kunogona kukubatsira kuyeuka kuti imhaka yaJesu ndipo patinogona kunyengetera nechivimbo kuna Baba. Jesu akatidzidzisa kukumbira zvese muzita rake. Haitombofaniri kunge iri kumagumo. Asi yeuka: munamato unonzwa Mwari unongogona chete kutenda kuna Jesu.
Usangonamata kana uchinge wangoida
Munamato haufanire kuve chimwe chinhu chinoitika kamwechete mune imwe nguva, chete munguva dzekutambudzika. Minyengetero ine simba kazhinji bva kubva pamararamiro ekunamata. Naizvozvo namata kuna mwari mazuva ese. Kazhinji pazuva. Taura naMwari. Ane shungu dzekupedza nguva ainewe. Kutenda kwako kuchawedzera uye hupenyu hwako hunoshanduka.
Kana iwe uchida kunamata zvakatonaka, bvunza Mwari. Bhaibheri rinoti tinogona kukumbira Mwari kuti vatidzidzise kunamata uye Anopindura. Namata kuna Mwari uchiti: Ishe, ndinofanira kunamata sei?
Saizvozvo Mweya unotibatsirawo pautera hwedu; nekuti zvatichakumbira zvakakodzera, hatizivi, asi Mweya amene unotireverera nokugomera kusingatauriki.
VaRoma 8: 26
Verenga Munyengetero waIshe, somuenzaniso, uye kumbira Mwari kuti akubatsire kunamata zvakanyanya saJesu. Usashandise senzira yekudzokorora, asi semuenzaniso wekuti ungataure sei naMwari:
Baba vedu vari Kudenga! Zita renyu ngariitwe dzvene. Humambo hwenyu ngahuuye; Chido chenyu ngachiitwe, panyika sezvachinoitwa kudenga. Tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva. Regerera zvikwereti zvedu, sekuregerera kwatinoita vanezvikwereti nesu. Ngatirege kuwira mumuedzo, asi tinunure pane zvakaipa, nekuti hwako ndohwe humambo, nesimba nekubwinya nekusingaperi. Ameni ".
Tinogona kunamata nenzira dzakasiyana siyana, hapana yakaoma uye inokurumidza mitemo pamusoro pekunamata. Kunamata kutaura kuna Mwari. Munamato haufanire kunge wakanaka kana kuti unzwe kuti unzwike.
Bhaibheri rinoti tinofanira kunamata nguva dzose. Mwari anogara achinzwa minamato yedu, zvisinei kuti tiri kupi. Asi zvakare zvakanaka kutora nguva yekunamata wega naMwari. Zvakafanana nekuita hurukuro yepedyo neshamwari, pasina zvinokanganisa. Jesu aigara achiedza kuwana nguva yekunamata ega.
Asi iye waienda kumarenje achinonyengetera.
Tinogona namata wega kana neboka. Chinhu chakakoshesa hukama naMwari, kwete zvinofungwa nevamwe vanhu. Icho hachisi chiito chekufadza, chiri kutaura chokwadi naMwari. Uye hakusi kudzokororwa kwemashoko emashiripiti kuti chimwe chinhu chiitike. Tinogona kudzokorora minyengetero yedu kuna Mwari, asi hatifanire kurega munamato uchive a kukanganisa kusava nehanya.
Uye pamunonyengetera, musava sevanyengeri; nekuti vanoda kunyengetera vakamira musinagoge nemumakona emigwagwa, kuti vaonekwe nevanhu; Ndinokupikira kuti ivo vatowana mubairo wavo.
Asi iwe kana uchinyengetera, pinda muimba yako yemukati, ugovhara mukova, unyengetere kuna Baba vako vari pakavanda; zvino Baba vako vanoona pakavanda vachakuripira pachena.
Uye uchinamata, usashandise kudzokorora kusingabatsiri, sevaHedheni, vanofunga kuti nehurukuro yavo vachanzwikwa.
Naizvozvo regai kuva saivo; nekuti Baba venyu vanoziva zvamunoshaiwa musati mavakumbira.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chinokubatsira kuti unzwisise nzira yekunamata kuna Mwari zvinoenderana neBhaibheri. Kana ikozvino iwe uchida kuziva kuti Jesu akatidzidzisa sei kunamata, ramba uchivhura Ziva.online.